Player | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Myanmar Football LIVE TV.APK
မြန်မာ VS ဗီယက်နမ် နှင့် ထိုင်း VS အင်ဒိုးနီးရှား ဆီးမီးဖိုင်နယ် ဗိုလ်လု ပွဲစဉ် များကို ဖုန်းထဲမှာ တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှု ချင်သူများ အတွက် ဆော့ဝဲလ် အဖြစ် ဖန်တီး ထားပါတယ်။
မြန်မာ နဲ့ ဗီယက်နမ် ပွဲကို ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် မြန်မာ VS ဗီယက်နမ် ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို နှိပ် ပြီး ကြည့်ရုံလေး ပါပဲ။
လိုင်းသုံးလိုင်း ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။
- မြန်မာ VS ဗီယက်နမ်
- ထိုင်း VS အင်ဒိုးနီးရှား
- MRTV အစီအစဉ် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာဒေါင်းယူ ထားပါ
▼ userscloud.com ▼ OR ▼ === ▼
Original link - http://www.aungkyawthu.net/
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, June 13, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ Android, Phone Application, Player
ကွန်ပြူတာ အတွက် Player ကောင်းကောင်းလေး တစ်ခု - K-Lite Mega Codec Pack v11.2.0 Final
K-Lite Mega Codec Packကတော့ Player လေး တစ်ခု ပါဘဲ Latest Version လေး တွေ့လို့ တင်ပေး လိုက်တာပါ။ အရင် ကလည်း ကျွန်တော် တင်ပေးဖူး ပါတယ်။ အဲဒါ ကတော့ Version အဟောင်းပါ။ ကွန်ပြူတာမှာ အသုံးပြု ရမှာပါ။
အခြားသော User များက PC လား Phone လား မခွဲခြားပဲ လာလာ မေးနေ ကြလွန်း လို့ပါ။ ကျွန်တော် လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Player တစ်ခုပါ။ ဘယ်လို Video File မျိုးကို မဆို Support လုပ် ပါတယ်။
ဒါလေးကို Install လုပ်ထား ရုံနဲ့ 3gp, FLV, WMA အစ ရှိတဲ့ Window Media Player က မဖွင့်နိုင်တဲ့ Video File တွေကို Window Media Player နဲ့ ဖွင့်နိုင် ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ဒီကောင်လေးရဲ့ အစွမ်း အစကို သိလောက် ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, June 03, 2015 No comments:
မြန်မာ ဘောလုံးပွဲတွေ TV Channel တွေ ကြည့်နိုင်တဲ့ Shwe Htee TV
U20 world cup မှာ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင် နေတဲ့ မြန်မာ ပွဲတွေကို မိမိ Android Device ကနေ ကြည့်ချင် တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် Myanmar ရုပ်သံ လိုင်းတွေ ဖြစ်တဲ့
MRTV-4, Channel 7, MNTV စသည့် ရုပ်သံ လိုင်းတွေကို ကြည့်ချင်တဲ့ အဝေးရောက် မြန်မာတွေ အတွက် အထူး ရေးသား ထားတဲ့ Shwe Htee TV လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ညီလေး အောင်ကျော် ဖန်တီး ထားတာပါ ကျွန်တော် ခုဘဲ လက်တွေ့ စမ်းသပ် ထားပါတယ် လိုင်း အားလုံး လိုလို ကြည်လင် ပြတ်သားပြီး မထစ်မငေါ့ ကြည့်နေ ရတယ်.. လိုင်းလည်း အသင့် တင့် ကောင်းလို့ပေါ့...
ကဲ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေစွာ ဒေါင်းယူ ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
2.8 MB ပဲရှိပါတယ်။
▼ my.pcloud.com ▼ OR ▼ solidfiles.com ▼ OR ▼ mediafire.com ▼
Original link - http://www.aungsanmks.com/2015/06/tv-channel-shwe-htee-tv.html
Myanmar TV Cband
မြန်မာ အသင်းကို အမှန်အကန် အားပေး ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒါလေးကို ဒေါင်းယူ ထားလိုက် ပါဦးနော်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ် နဲ့ ဆီးဂိမ်းပွဲစဉ် များကို ဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ကြည့်လို့ ရမယ့် Application လေး တစ်ခု ဖြစ်ပါ တယ်။ သာမန် ဖုန်းရဲ့ အင်တာနက်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် တော်တော်လေး အဆင်ပြေနေ တာကို စမ်းပြီး ကြည့်ပြီးပါပြီ။
ဒီ Application လေး ကတော့ ဘောလုံးပွဲ တွေပြီးသွား ရင်တောင်မှ MRTV, MRTV-4, Channel 7, 5Plus ရုပ်သံလိုင်းမှ လာတဲ့ အစီအစဉ် များကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုကန်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ်နဲ့ ဆီဂိမ်း ပွဲစဉ်ကို ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အပေါ်ဆုံးမှာ မြင်တွေ့ ရမယ့် MRTV Live ကို ရွေးချယ်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာပုံကိုတော့ အောက်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Android OS အားလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
▼ play.google.com ▼ OR ▼ usersfiles.com ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, June 01, 2015 No comments:
ဂီတ ဝါသနာရှင်များ အတွက် Ultimate Guitar Tabs & Chords v4.0.1 [Unlocked] APK
ဂီတ ဝါသနာရှင်များ အတွက် Ultimate Guitar Tabs & Chordsv4.0.1APK နောက်ဆုံး ဘားရှင်းလေး လက်ဆောင် ပေးချင်ပါတယ်…..
ဒီApk လေးက သီချင်း တစ်ပုဒ်ရဲ့ Chords တွေကို အလွယ်တကူ ရှာပေး ပါလိမ့်မယ်။ သီချင်း အပုဒ်ပေါင်း ၆သိန်းကျော်ကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်
File Size 14.87MB ရှိပြီး Android OS Version 1.6 နှင့်​ အထက်​ ဖုန်းများမှာ ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုချင်ရင် အောက်က link မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
DVD Movies တွေကို ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အခြားသော Player တွေ ဘယ်လောက်ဘဲ ကောင်းတယ် ပြော ပြော DVD Player က အကောင်းဆုံး ပါဘဲ။ အဲဒီ အတွက် Cyberlink Power DVD Ultra 3D v15.0.1510.58 နောက်ဆုံးထွက် Version ကို မျှဝေပေး လိုက် ပါတယ်။
GOM Player, Media Player Classic, FlV အစ ရှိတဲ့ Player များက ကောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် DVD Format ကိုတော့ ဖွင့်လို့ မရနိုင် ပါဘူး။ အခု တင်ပေး လိုက်တဲ့ Cyberlink Power DVD ကို Install လုပ်ထား မှသာ DVD ဇာတ်လမ်းခွေများ သီချင်းခွေ များကို ကြည့်ရှု နားဆင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Blu-ray 3D and DVDdiscs တွေ ပါဝင်တဲ့ အပြင် Movies and videos files တွေ ကိုလည်း Full Screen အပြည့် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
HD ရုပ်ထွက်တွေ 3D ရုပ်ထွက်ပါတဲ့ Movies တွေ ဆိုရင် မူရင်း ရုပ်ထွက် အတိုင်း ကြည်လင် ပြတ်သားစွာ အရသာရှိရှိ ကြည့်ရ မှာပါ။ DVD Format တစ်ခု ထဲတင် မဟုတ်ပါဘူး အခြားသော Format ပေါင်း များစွာကိုလည်း Support လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်။ အခု အသစ်ထွက် လာတဲ့ Version မှာ Function တွေ ကတော့ တော်တော်ကြီးကို စုံလင် ပါတယ်။
Full Version အသုံးပြု နိုင်ဖို့ အတွက် Keygen ကိုပါ တင်ပေး ထားပါတယ်။ အသေးစိတ် ကိုတော့ အောက်မှာ ဆက်ပြီး လေ့လာလိုက်ပါ။
CyberLink PowerDVD Ultra 15.0.1510.58 final release is the world's leading Media Player developed with the latest multimedia technology that supports all popular formats such as Blu-ray, 3D Blu-ray, MP4, VideoCD, SVCD, DVD, MPEG, H.265 player, MP3, WAV, MOV, and the new generation of video 4K UltraHD, etc, allowing users to download videos from best quality up to 50% faster that the current formats do.
--->CyberLink PowerDVD Ultra 15.0 Features<---
CyberLink PowerDVD Ultra 2015 is known by its high efficiency thanks to the support of GPU and CPU hardware acceleration. It is also designed for image scaling technology TrueTheater HD to permit users watch free movies in HD. and listen to HD music audio files without audio quality loss. CyberLink PowerDVD Ultra 15 crack patch.
CyberLink PowerDVD Ultra 15 allows you to stream data from your PC to other mobile device and can convert 2D to 3D movies. Additionally, users will quickly organize media files including (video, audio, images) and access it from PC, Cloud and mobile devices. The enhanced quality of content playback, expanded the base of supported data types andarefreshed user interface.
CyberLink PowerDVD Ultra 15.0 free download is compatible with Windows7(32-64 bit), Windows 8/8.1 (32-64 bit), Windows Vista (32-64 bit), Windows XP (32-64 bit). CyberLink PowerDVD Ultra 15 is multilingual and supports languages such as: English, Portuguese, Russian, German, French, Japanese, Turkish, Spanish, Arabic, Urdu, Chinese, etc.
--->How to Install CyberLink PowerDVD Ultra 15.0<---
Step 1- Install the program - Double click on "PowerDVD_15.0.1510.58_Ultra_DVD140721-09.exe".
Step 2- Run the keygen as administrator and click on serial button.
Step 3- Copy serial number and use it to register the program.
Step 4- Enjoy CyberLink PowerDVD Ultra 15 Full Version.
အသုံးပြုချင်ရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
Media Player Classic Black Edition v1.4.4 Final
ဒါလေး ကတော့ Player လေး တစ်ခု ပါဘဲ Latest Version လေး တွေ့လို့ တင်ပေး လိုက်တာပါ။ အရင်က လည်း ကျွန်တော် တစ်ခု တင်ပေး ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်ရှိ သုံးနေတဲ့ Player တစ်ခုပါ။ ဘယ်လို Video File မျိုးကို မဆို Support လုပ်ပါတယ်။ ဒါလေးကို Install လုပ်ထား ရုံနဲ့ 3gp, FLV, WMA, အစရှိတဲ့ Window Media Player က မဖွင့် နိုင်တဲ့ Video File တွေကို Window Media Player နဲ့ ဖွင့်နိုင် ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ဒီကောင်လေးရဲ့ အစွမ်း အစကို သိလောက် ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ Video ကြည့် ချင်သူများ သီချင်း နားထောင် သူများ အတွက် အထူး သင့်တော်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးနဲ့ သုံးလို့ ကောင်းတဲ့ Player တစ်ခု ဖြစ်လို့ ဒေါင်းယူ ထားစေ ချင်ပါ တယ်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, April 14, 2015 No comments:
ဘောလုံးပွဲနှင့် အခြား အားကစား ပွဲများကို ကြည့်ရှုနိုင်မည့် ဖုန်း APK
ဖုန်းမှာ ဘောလုံး ပွဲတွေကို တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှု ချင်သူများ အတွက် football sport apk လေးကို တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ဘောလုံး ပွဲတင် ကြည့်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး အားကစားနဲ့ ပတ်သက် တာတွေ ကိုပါ ကြည့်ရှုနိုင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
သဘော ကျတယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ယူသွား လိုက်ပါ။။
မြန်မာ ပွဲတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ပွဲစဉ်တိုင်းကို live score ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ - Futbol 24 APK
မြန်မာပွဲတွေကို live score ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ - Futbol 24 APK လေးပါ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နိုင်ငံ တကာ အသင်း / ကလပ် အသင်းပွဲစဉ်တွေရဲ့ ရလဒ်ကို အင်တာနက် ကလေး ဖွင့်ပြီး live score ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
- send matches' forecast!
Updated : December 3, 2014
▼ play.google.com ▼ OR ▼ 1mobile.com ▼ OR ▼ solidfiles.com ▼
Double Music Player လေး ကတော့ ဖုန်း တစ်လုံး ထဲမှာ သီချင်း နှစ်ပုဒ်ကို တစ်ပြိုင် တည်း ဖွင့်ပြီး နားထောင်လို့ ရတဲ့ application လေး ဖြစ်ပါတယ်။
နားကြပ်မှာ ဘယ် တစ်ပုဒ် ညာတစ်ပုဒ် နားဆင်ရ မှာပါ။
pro version ဖြစ်တာကြောင့် play store မှာ ဆိုရင် ပိုက်ဆံပေး ဝယ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး အောက်မှာ free download ရယူနိုင် ပါတယ်။
This isatrial version, you can download the full version from link below:
Pro version : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.doublemusic.mrani.pro
"Music tells stories, breaks hearts, reduces us to tears, or seduces us into falling in love, over and over and over again. Music isauniversal language. A human creation fromadivine source", and with this application you gonna share music inadifferent way, If your friend wants to listen to pop, but you want rock and roll but you have just one Smartphone, Double Music Player will solve the problem.
Double Music Player isamobile application to play two songs at the same time, with just one smartphone or tablet and one
earphones, so you can play two audio files, one on the left, and the other on the right of your earphones, the application list all your music folders, and for each folder you gonna havearelated playlist, it comes with different themes, so you can customize the visual aspect of the application.
- Browse and play your music by songs, folders
- Play MP3, MP2, MP1, OGG, MIDI, AAC, AAC+, 3GP, XM, IT, S3M, MOD, MTM, UMX, MO3, MP4, WAV, AIFF, M4A, OTA
- Create auto playlists within the player
- Automatic song recognition System requirements:
- Earphones - Android 3.2 or higher
- Works on tablets with screens from7in++
Double Music Player, Another way to share music !
Help us by sending your ideas, feature requests and bug reports to supsmartcoder@gmail.com
Updated : March 1, 2014
Size : 284k
▼ usersfiles.com ▼ OR ▼ m.box.com ▼
ဒီတစ်ခါ မျှဝေချင် တာက Player ကောင်းကောင်း လေးပါ အသစ် ထပ်တက် လာတာနဲ့ အားလုံး အတွက် တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ဒီ Pro ဗားရှင်းမှာ ဆို features တွေ အမိုက် စားတွေ တိုးလာ ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးမှာ albums, artists, genres, songs, playlists, folders, and album artists. စာတွေကို ကောင်းကောင်း Performance အဖြစ် မြှင့် ထား တာကို သတိထား မိတယ်။
သူ့မှာ ကိုင်ပိုင် Browser လည်း ပါသလို လိုင်း နည်းနည်း ကောင်းရုံနဲ့ လိုင်းပေါ် တိုက်ရိုက် ရှာဖွေ နားဆင် နိုင်သလို trial Version ထက် အဆပေါင်း အများကြီး သာလွန်း ပါတယ်။ အသံလည်း ကြည်လင် ပြတ်သားပြီး DJ သီချင်း တွေနဲ့ ဆို လန်းမှ လန်းပါ။ အသံပိုင်း Display ကိုလည်း ကိုယ် လိုသလို စိတ်ကြိုက် ပြုပြင် နားဆင် နိုင်ပါတယ်။
Size 11.0 MB ရှိပါတယ်။ 2.0 အထက် ဖုန်း အားလုံးမှာ အဆင်ပြေ ပါတယ်။
ဖုန်းကနေ အာဆီယံ နိုင်ငံတွေမှာ ရှိတဲ့ TVများကို ကြည့်နိုင်မည့် Asean TV Size (5.2MB)
ဖုန်းကနေ asean နိုင်ငံများမှာ ရှိတဲ့ TV လိုင်းများကို ကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ။ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ TV လိုင်းများ
ကို စုစည်း ထားတာပါ ခင်ဗျာ။ Myanmar TV ကိုလည်း ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲကို ကြည့်ချင် သူများ အတွက်လည်း အဆင်ပြေ ပါတယ် ဘောလုံး လိုင်းတွေ ကိုပါ
ထည့်ပေး ထားပါတယ် ခင်ဗျာ။
အသုံးပြုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
From : ဘလော့ခရီးသည် by Photoshop@AungKyawThu